Ciidamada DANAB oo Howlgallo ka sameeyay Jubbaland | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada DANAB oo Howlgallo ka sameeyay Jubbaland
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee kumaandoosta DANAB ayaa saakay Howlgallo ka sameeyay deegaanno ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland.
KISMAAYO, Soomaaliya - Ciidamada sida gaarka ah utababaran ee Kumaandoosta DANAB ayaa howlgal ka sameeyay deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland kuwaasoo maalmihii u dambeeyay ay soo galeen kooxda Al-Shabaab.
Howl-galladan ayaa ahaa kuwa ballaaran, waxaan saraakiisha ciidamada Danab ay sheegeen inay la wareegeen gacan ku heynta deegaanada kala ah: Beer-Xaani, Qudus, Liba-kuus iyo Cabdi Dhoore oo hoostaga magaalada Jamaame ee Jubada Hoose.
Saraakiisha ciidamada ayaa waxay sheegeen inay qabteen 3 xubnood oo ka tirsan kooxda Argagaxisa ee Al-Shabaab.
Ciidamadii horay u yimid deegaankan ayaa isaga cararay iyagoo aan la ogeyn halka ay qabteen, waxaana ciidamada DANAB ay sheegeen in ay baacsan doonaan haraadiga ciidamada baxsadka ah ee meesha isaga cararay.